အဘယ်ကြောင့် Flex နှင့် Apollo အနိုင်ရလိမ့်မည် | Martech Zone
အဘယ်ကြောင့် Flex နှင့် Apollo နိုင်လိမ့်မယ်
တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 1, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ပထမ ၃ နာရီမှာကုန်ဆုံးခဲ့သည် နယ်ခြားမဲ့ ဂူဂဲလ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ရာတွင်အချို့သော Cross-browser quirks များသည် အဆိုပါ site ကိုပြီးပြည့်စုံသော, တရားဝင်နှင့်အတူရေးသားခဲ့သည် CSS ကို။ သို့သော် PC ပေါ်တွင် Firefox2နှင့်အတူ bullet menu list သည် pixel shift ရှိသည်။ Internet Explorer6တွင် CSS method များထဲမှတစ်ခုလုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ။
Firefox2(ထူးဆန်းသော pixel shift ကိုစာလုံးစောင်းဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်) ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဆိုတဲ့အချက်ကို Apple, Mozilla က, Microsoft ကနှင့် တေးသံစုံကဇါတ် တစ် ဦး အသုံးချကြောင်း applications များရေးသားနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြသည် Web စံနှုန်း သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီမှရှက်စရာဖြစ်သင့်သည်။ Browser တစ်ခုစီ၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် scripting များမှတစ်ဆင့်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့်ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါရပ်များရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်လုံးဝနားမလည်ခဲ့ပါ။
ဤသည်အဘယ်ကြောင့်၏ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Apollo နှင့် Flex ကို အင်တာနက်ကိုကျယ်ကျယ်လောင်လောင်လွှင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ငါအကြောင်းကိုစုံတွဲတစ်တွဲရက်အကြာရေးသားခဲ့သည် မှတ်မိလား, အက်ပလီကေးရှင်းရေးထားသည် (နှင့် Apollo သို့လျင်မြန်စွာ ported) application တစ်ခု။ မင်းကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင် - သွားစမ်း - ဒါအံ့သြစရာပဲ။
Flex အောက်မှာပြေး Adobe Flash ၏ browser plugin ကို ဒါက plugin တစ်ခု 99.9% အများကြီး အင်တာနက်ဖွင့်သည် (သင် Youtube ဗီဒီယိုကိုကြည့်သည့်အခါတိုင်းပြေးနေသည်) ။ Apollo သည်တူညီသောအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသော်လည်း browser ကိုကန့်သတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ application window တွင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မှ Adobe ကဖြေ - Flex application framework မှာ MXML၊ ActionScript 3.0 နဲ့ Flex class library တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ developer များက application ၏ user interface element များကိုကြေငြာရန်နှင့် client logic နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအတွက် ActionScript ကိုအသုံးပြုရန် MXML ကိုအသုံးပြုသည်။ developer များက Adobe Flex Builder ကို အသုံးပြု၍ MXML နှင့် ActionScript source code ကိုရေးသည်။ IDE ဒါမှမဟုတ် standard text editor ။
Cross-browser ရိုးရှင်းသော menu တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပျက်မိသောကြောင့် browser များအနေဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသော web application တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် developer များအနေဖြင့်မည်သည့် browser သို့မဟုတ် desktop ပေါ်တွင်သင်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေထိုအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန် hacks သို့မဟုတ် browser-specific scripting များကိုရေးသားရမည်။ Cross-browser ကိစ္စမရှိပါ နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအလွယ်တကူသယ်ဆောင်။ ဘရောက်ဇာမှထွက်ရန် (သို့) ထွက်ရန်နောက်ထပ်အားသာချက်။
Browser တစ်ခုချင်းစီတွင်မည်သို့ကြည့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအခြားသောအားသာချက်များလည်းရှိသည်။ Flex အတွက်ရေးသားခြင်းသည်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ မဟုတ် တရားဝင်ပရိုဂရမ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်မာအများစုသည် Flex သို့မဟုတ် Adobe ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်။ သူတို့ကမင်းတို့ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာအကုန်အကျခံပြီး ASP.NET မှာဒီ feature ကိုလိုင်းအနည်းငယ်ယူပြီးအကုန်အကျခံအောင်လုပ်ခဲ့တယ် MXML.
သငျသညျ Flex နှင့် Apollo အပေါ်ဆက်လက်တက်ချင်လျှင်, ငါ့သူငယ်ချင်းဘီလ်၏ဘလော့ဂ်ကိုမှာယူပါ။
Blogger အသစ်များအတွက် Reader Acquisition Strategies
Technorati သည် Cool Tools အချို့ဖြင့် Tools Page ကိုပြန်လည်စတင်သည်။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 7: 08 AM
ကောင်းပြီ Doug ကဆိုသည်။ အကယ်၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာသည်ယောက်ျားများကိုရလျှင်ကျွန်ုပ်သည် developer များပိုမိုမျှော်လင့်ပါလိမ့်မည်
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 3: 28 AM
> ၎င်းသည်အင်တာနက်၏ ၉၉.၉% အလုပ်လုပ်သော plugin တစ်ခုဖြစ်သည်
ဤနေရာတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်andပြီလတွင်ကျွန်ုပ်၏ Ubuntu x2007_86 (AMD64) desktop environment အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သော flash client မရှိပါ။
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 9: 55 AM
စတီဖင် - သင်မှန်တယ် ... ဒါကမခိုင်မာတဲ့စာရင်းဇယားဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာaလို့လူသိများတဲ့အရာပဲ Swag.
ဧပြီ 16, 2007 မှာ 11: 43 AM
ဤတွင် Flash ၏ထိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိ Flash Player 84.3 ဖြင့် ၈၄.၃% ထိုးဖောက်နေသည်။
21:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 11, 15
ကောင်းပြီ Doug, Nice entry ကိုစတီဖင်ကဆိုသည်။
27:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 30
Hmm .. ဒီနည်းပညာကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်ရေးသည့်အခါ၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ငါသွားကြည့်မယ်။
22:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 18